Fiainam-piangonana : tsy milamindamina ao amin’ny FLM | NewsMada
Fiainam-piangonana : tsy milamindamina ao amin’ny FLM
Nihaona tamin’ny mpanao gazety tetsy Anosy omaly ireo mpino niaraka tamin’ny mpitandrina maromaro avy amin’ny fiangonana FLM. Navoitran’izy ireo tamin’izany fa mitaky ny fandraisan’andraikitry ny filoha nasionalin’ny FLM, Rakoto Endor Modeste izy ireo handaminana ny raharaha mba tsy haharatsy laza ity fiangonan-dehibe ity.
Efa tongo bakivaky ka sady maharary no mahamenatra no zava-misy eo anatrehan’ny fiangonana loterana Malagasy (FLM) amin’izao fotoana izao raha ny filazan’ireo kristianina. Mitohy ny korontana ary tondroin’ireo kristiana ho tompon’antoka amin’izany ny lohandoham-pisorona ao amin’ny synodam-paritany Antananarivo (Spanta).
Fantatra fa anisan’ireo nitarika fikomiana sy fitokonana tao amin’ny anjerimanontolo tany Toamasina ny tenany ka efa nahita olana tany an-toerana tao amin’ny synodam-paritany. Avy eo indray, hoy ny loharanom-baovao, nitarika fikomiana sy korontana tao amin’ny Sekoly ambony loterana momba ny Teolojia (Salt) andiany laika indray.
Fantatra fa tsy eo amin’ny fiainam-piangonana ihany fa dia mitohy hatrany amin’ny fiainam-pirenena izany ka nitarika ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny ministeran’ny Atitany handrara azy tsy hivoaka an’i Madagasikara ( Interdiction de sortie du territoire-IST). Mangataka ny filoha nasionalin’ny FLM ny pastora Rakoto Endor Modeste araka izany ireo kristiana FLM eto Antananarivo mba handray ny andraikiny manoloana izao toe-javatra izao.